Coincheck yazisa ukubuyiselwa ukuqala kwiveki ezayo - Blockchain News
EyoMdumba 9, 2018 admin
Japanese cryptocurrency exchange Coincheck wavakalisa ukuba uceba ukuvumela abasebenzisi ukurhoxisa imali yendawo akhawunti zabo olandelayo ngoLwesibini.
Oku kuza emva kokuba uluhlu lomnqweno yimfumba ku Jan. 26, ababebanga kwacima inkonzo elirhabaxa. ke Coincheck wabiza inkomfa cofa kwi apho Babevuma ukuba 500 million AKUKHO ivezwa (elibiza $533 million ngexesha) iqatshelwe kwi KDE yayo enkcazelo isela.
Kwisaziso ngeposi namhlanje, le nkampani ithe (nge translation zimpahla):
“kungoku nje, impahla abathengi’ yen Japanese zilawulwa ngokukhuselekileyo kwiziko zemali. Siza ziyaqala notsalo eqala ngoFebruwari 13, 2018.”
Abathengi ukuba imali wanamathela kwi ngokutshintshiselana ukususela oko kuqinisekiswa ukuba ubunzima Kusenokwenzeka ukuba yintoni lomnqweno yimfumba inkulu kwimbali cryptocurrency.
njengonogada zezimali yaseJapan, Financial Agency Services (FSA), uthe ngexesha, “Ulawulo olungafanelekanga lweengozi nkqubo yaba eqhelekileyo kwi Coincheck.”
amaqela Bittrex nge t ...
Post Previous:Kwenzeka ntoni Binance Exchange kwaye xa bid ziqala
Post Next:Kutheni Coinbase otyholwa sithwalisa inethiwekhi Bitcoin nendlela SegWit imisebenzi ?
Isilimela 11, 2018 e 10:39 AM
EyeThupha 29, 2018 e 8:36 AM